Maitiro ekuisa iyo nyowani vhezheni yeLibreOffice 6.2.2? | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura itsva yekugadzirisa vhezheni ye iyo yakakurumbira LibreOffice hofisi suite, ichisvika vhezheni yayo LibreOffice 6.2.2 iyo inouya kugadzirisa zvinopfuura makumi mashanu zvikanganiso.
Zvikanganiso zvacho mamwe acho ari kushanda gadziriso yeimwe suite mukati meiyo KDE Plasma desktop nharaunda. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza iro bhuku rakagadzirwa nemumwe wako.
Si Iwe unofarira kugona kuisa iyi yekugadzirisa vhezheni yeLibreOffice mune yako system Iwe unogona kuteedzera chero anotevera matanho atinogovana newe maererano nemugove wavari kushandisa.
1 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.2.2 pane Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa?
1.1 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.2.2 pane Fedora, CentOS, OpenSUSE uye zvigadzirwa?
1.2 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.2.2 pane Arch Linux, Manjaro uye zvigadzirwa?
1.3 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.2.2 uchishandisa SNAP?
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.2.2 pane Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa?
Kuti tigoisa iyi nyowani vhezheni yeLibreOffice pane yedu system tinogona kuzviita nenzira mbiri dzakasiyana.
Yokutanga ndeye kungovandudza mapakeji esisitimu yedu ne:
sudo apt kugadzirisa && sudo apt kusimudzira
Iyo chete yekudzikira ndeyekuti LibreOffice 6.2.2 mapakeji haasati amutsidzirwa parizvino mukati mezvivakwa zvepamutemo saka unofanirwa kumirira mamwe mazuva mashoma.
Imwe sarudzo (uye iyo yandinofunga inokurudzirwa) ndiko kubvisa yekutanga vhezheni kana uine icho, izvi ndizvo kuitira kudzivirira matambudziko anotevera uye nekumisikidza yakachena ye suite.
Kune izvi isu ticha vhura terminal uye tigoita zvinotevera mairi:
Ndatoita izvi isu tinofanira kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti kupi muchikamu chako chekurodha pasi isu tinokwanisa kutora iyo pasuru yekuisa iyo pane yedu system.
Pa webhusaiti yepamutemo Iwe unozogona kutsvaga mapakeji eese ari maviri 32-bit uye 64-bit masisitimu. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Waita kurodha pasi Tiri kuzunura zvirimo mupakeji ichangobva kuwanikwa nemutemo unotevera (mune makumi matanhatu nematatu):
Ichiri che kesi yemakumi matatu nematatu ivo vanoita zvinotevera:
Pashure Tiri kuzopinda dhairekitori rinokonzerwa necompression ne:
Kana mune iyo makumi matatu nematatu pinda nemurairo uyu:
Isu tinopinda dhairekitori uko maFreeOffice madhiri mafaera ari:
Uye pakupedzisira tinoisa mapakeji ari mukati meiyi folda ne:
Uye ndizvozvo, tichava neiyi nyowani vhezheni yeLibreOffice yakaiswa.
Saka iyo suite iri muchiSpanish pane peji rimwe chete iwe unodhawunirodha pasuru yekushandura mune inoenderana chikamu kurodha pasi.
Unzip iyo yakarodha pasuru ne:
Pashure isu tinopinda dhairekitori ne:
Uye isu tinoisa mapakeji ne:
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.2.2 pane Fedora, CentOS, OpenSUSE uye zvigadzirwa?
Kana iwe uri kushandisa sisitimu iyo ine rutsigiro rwekuisa rpm mapakeji, iwe unogona kuisa iyi nyowani nyowani nekuwana iyo rpm package kubva ku LibreOffice kurodha peji.
Takatora pasuru yatinosvinura nayo:
Kana ye32-bit masisitimu ane:
Kuisa mapakeji edudziro, iwo anofanirwa kutorwa pasi kubva papeji rimwechete uye kusunungurwa ne:
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.2.2 pane Arch Linux, Manjaro uye zvigadzirwa?
Muchiitiko cheArch nemaitiro ayo akatorwa Tinogona kuisa iyi vhezheni yeLibreOffice, isu tinongovhura terminal uye tinyore:
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.2.2 uchishandisa SNAP?
Kana yako system iine rutsigiro rwekumisikidzwa kwemapakeji kana iwe uri mumwe weavo vanofarira kuisa vachishandisa mapapiro emvura, ndinogona kukuudza kuti LibreOffice inoparadzirwa kuburikidza neiyi tekinoroji.
Pari zvino chinokanganisa chete ndechekuti iko kunyorera hakuvandudzwe nekukasira saka unogona kungomirira mazuva mashoma kuti ivandudzwe kuti riiswe.
Iwo wekurayira kuisa ndeye:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Maitiro ekuisa iyo nyowani vhezheni yeLibreOffice 6.2.2?
Ndatenda nerondedzero uye makorokoto pachinyorwa ichi.
Mari0, Mario dombo rakashongedzwa nechakakosha chePortal